🥇 ▷ BlackBerry Luna wuxuu noqon lahaa "KEY2 Lite": sidan ayaa loo sameeyaa iyadoo loo eegayo wax ka qabashada ✅
Cusub muuqaal lagu daabacay Twitter-ka Evan Blass, leaker caan ah oo loo yaqaan magaca baahin, waxay noo horseedaysaa inaan ogaano waxa aan la daabicin BlackBerry Luna. Sheegaan, oo horeyba uga soo muuqday xanta qaar bishii Febraayo ee la soo dhaafay, wuxuu muujin lahaa qalab la mid ah KEY2 cusub oo lagu arki karo sawirka kore, laakiin koox xoogaa yar.
Leure isku mid ah ayaa qeexaya a “KEY2 LiteWaxaanay sheeganeysaa in qaabkani uu lahaan doono isku qaab qaab. Marka, waa inaan filaynaa taleefan casri ah oo leh furaha jirka dhanka hore, gadaal balaastig ah waa laba-cam gadaal, iyo muuqaalka kujira shaybaarka ayaa si sax ah u muujinaya xubnahan dambe.
Marka loo eego macluumaadka la soo sheegay, midabada moodelkani waa inuu ahaadaa casaan, buluug waa naxaas, oo leh laatiyo midabyo kala duwan oo dhinacyada ah.
AKHRISO: BlackBerry KEY2: amarro hordhac ah ayaa laga furay Yurub
Soo bandhigida BlackBerry Luna ayaa la sugayaa intii u dhaxeysay Agoosto iyo Sebtember, laakiin meesha saxda ah ee ogeysiiska ayaa laga yaabaa IFA 2018. Macluumaad dheeri ah oo ku saabsan qalabka, astaamaha iyo qiimayaasha waxaan sugi doonnaa toddobaadyada soo socda.
Xigasho: banaanka (Twitter)